Kunamata Points Kumurume Anotya Mwari | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Points Kumurume Anotya Mwari
Nhasi tichave tichinangana nemunamato mapoinzi kune anotya Mwari murume. Sangano remuchato rakarongwa naMwari rakadai rinogara kwehupenyu hwese. Iwe unobvumirana neni kuti zvachose chakarebesa kupedza nemurume asiriye. Chimwe chezvinhu zvakawanda kana zvinhu zvinonamatirwa nemukadzi mumurume wavanoda kugadzikana nazvo kutya Mwari. Izvi zvinodaro nekuti ivo vanotenda kana iye achitya Mwari, haaizoita chero zviito zvakaipa zvinogona kukuvadza mhuri.
Mukadzi wese anoda murume anozomubata senge ndiye chete mukadzi pasirese. Murume uyo achave naye munguva yakaoma uye yakaonda, murume anozoita semupristi uye muporofita wemba. Nekudaro, vashoma chete ndivo vakagadzirira kuita izvo zvinotora kuve nemhando yemurume iyeye. Chinhu chimwe chakakosha kuziva ndechekuti zvese nezve hupenyu chibayiro. Kana iwe uchida chimwe chinhu chakashata iwe unofanirwa kunge uchida kupa chimwe chinhu nekudzoka. Zvinokufadza iwe kuziva kuti vakadzi vazhinji vanoda murume anotya Mwari haatodiwo Mwari zvakare. Vanotadza kunzwisisa kuti pakadzika panodana pakadzika.
Kazhinji, tinokwezva vanhu vanogovana zvakafanana hunhu kana zvakafanana hunhu nesu. Tisati tanyatsoongorora nzvimbo dzekunamatira, ngatikurumidze kuratidza zvimwe zvezvinhu zvekutora murume anotya Mwari semukadzi.
Zvinhu Zvekuita Kuti Utore Murume anotya Mwari
Nhanho yekutanga yekuve nemurume anotya Mwari kupa hupenyu hwako kuna Kristu semukadzi. Iwe haugone kuva nechinhu kubva kuhumambo iwe usati uri nhengo yehumambo. Unofanira kuziva kuti Kristu ndiye Ishe uye muponesi. Iwe unofanirwa kuziva chokwadi chekuti Kristu akatumwa naMwari kuti afambise ruponeso rwemunhu. Kuziva izvi uye kuzvigamuchira kunoita iwe uve nhengo yehumambo.
Ipapo unofanira kutyorwa, siya nzira dzako dzekare uye unamatire pamuchinjikwa.
Iva Mukadzi Anotya Mwari
Izvo hazvina kukwana chete kuti iwe ugare pasi ndokunamatira murume anotya Mwari iwe uchinge uchinge uchiziva Mwari iwe pachako. Chinhu chekutanga iwe chaunofanira kuita kuvewo munhu anotya Mwari zvakare. Kuva mukadzi anotya Mwari kunodarika kunzi muKristu nekuda kwezita. Hunhu hwako, hunhu uye zvese nezvako zvinofanirwa kuratidzira Kristu Jesu.
Chinhu chimwe chatinofanira kunzwisisa tese ndechekuti isu tiri mufananidzo chaiwo wevanhu vatinogara navo. Paunotya Mwari semukadzi, mabasa aIshe akagadzirwa nenzira yekuti unongokwezva varume vanenge vakaita sewe. Paunenge uine kuita kwaMwari, iwe unozoshongedzerwa neruzivo rwekuziva murume anotya Mwari kana vapfuti vatanga kuuya. Naizvozvi, haungagadzirise zvishoma nekuti iwe unoziva zvauri muna Kristu Jesu.
Baba Tenzi, ndinokutendai nezuva rakanaka rakaita serino. Ndinokutendai nenyasha dzamakandipa kuti ndione zuva rino, ndinokutendai nekundipa mumwe mukana, mumwe mukana wekukushandirai zvakanyanya, mumwe mukana wekugadzirisa zvakaipa zvangu, mumwe mukana wekutevera nekukuzivai zvirinani, Ishe, zita renyu ngarikwidziridzwe.Ishe, ndinonamata nhasi kuti muchandiropafadza nemurume akanaka. Ini ndinoramba kugadzirisa zvishoma. Ndinonamata kuti utumire nzira yangu murume wawakagadzirira, murume wawakagadzirira kuti ave mupirisita wemhuri, uyo achamira akamirira mhuri, ndinonamata kuti iwe umutumire nzira yangu muzita raJesu.
Ishe, sekutaura kunoita rugwaro, kutya Ishe ndiko kutanga kwehungwaru. Ini ndinonamatira murume chaiye nehungwaru chaihwo hunobva kuna Mwari. Ndinonamatira murume achakuziva kupfuura zvandinoita, murume anokutya kupfuura zvandinoita, murume anozoshandira uye anoda zvinhu zvaMwari zvirinani, ndinonamata kuti umutumire nzira yangu muzita ra Jesu.
Ishe Mwari, ndinonamata kuti mundidzidzise pazvinhu zvekuita. Ndinonamata kuti utungamire nhanho dzangu, ndinonamatira kubatana kwemweya pakati pangu nemurume iyeye, ndinonamata kuti iwe uite kuti chimwe chiitike pakati pedu muzita raJesu. Ishe Mwari, ndinonamata kuti mundipe huchenjeri chaihwo hwekuita nemurume wamakandirongera. Ini ndinonamata kuti iwe undidzidzise iyo chaiyo mhando yekupindura yekupa, ndinonamata kuti iwe uchengetedze rurimi rwangu nekuzvipira kwese, ndinonamata kuti iwe uzadze muromo wangu nehungwaru hunodiwa kuti upe mhinduro chaiyo muzita re Jesu.
Ishe, ndinonamata kuti mugadzirire murume anotya Mwari uyu nehungwaru chaihwo hwaanoda kuve murume mukuru. Ndinokurira mweya wehasha maari, ndinotsiura mweya wemhirizhonga maari nemvumo muzita raJesu.
Ishe, ndinonamata nhasi kuti muchandiropafadza nemurume akanaka. Ini ndinoramba kugadzirisa zvishoma. Ndinonamata kuti utumire nzira yangu murume wawakagadzirira, murume wawakagadzirira kuti ave mupirisita wemhuri, uyo achamira akamirira mhuri, ndinonamata kuti iwe umutumire nzira yangu muzita raJesu. Ishe, sekutaura kunoita rugwaro, kutya Ishe ndiko kutanga kwehungwaru. Ini ndinonamatira murume chaiye nehungwaru chaihwo hunobva kuna Mwari. Ndinonamatira murume achakuziva kupfuura zvandinoita, murume anokutya kupfuura zvandinoita, murume anozoshandira uye anoda zvinhu zvaMwari zvirinani, ndinonamata kuti umutumire nzira yangu muzita ra Jesu.
Ishe Mwari, ndinonamata kuti mundipe huchenjeri chaihwo hwekuita nemurume wamakandirongera. Ini ndinonamata kuti iwe undidzidzise iyo chaiyo mhando yekupindura yekupa, ndinonamata kuti iwe uchengetedze rurimi rwangu nekuzvipira kwese, ndinonamata kuti iwe uzadze muromo wangu nehungwaru hunodiwa kuti upe mhinduro chaiyo muzita re Jesu.
Ishe Jesu, ndinotsiura mhando dzese dzemurume wemweya idzo dzinoedza kutambudza muchato wangu kunyangwe ndawana murume chaiye wandakatemera. Ini ndinotsiura zvakaipa zvese zvakaipa izvo murume wemweya akadaro angangoda kushandisa kunetesa roorano muzita raJesu.
Murume anotya Mwari
Previous nyayaKunamata Kunongedzera Kupokana Nehuipi Huporofita
inoteveraKunamata Points Kune Mukadzi anotya Mwari
Angeline chikweya June 23, 2021 Pa 5: 52 am
Unoda minamato yekudzoreredzwa
admin vashandi June 23, 2021 Pa 6: 42 am
Nekuti kwakanyorwa kuti kana munhu achitaura, ngaataure semashoko aMwari; Ndinoraira nesimba remudenga zvese zvawakarasikirwa zvadzorerwa muzita raJesu.
INI pavakadzosa hutapwa hweZion, Takaita sevaya vanorota, ini ndinozivisa kudzoreredzwa kwezvinhu zvese zvawakarasa muzita raJesu. Iwe uchagovana uchapupu hwako munguva pfupi.
Washington Chikunguru 1, 2021 Na12: 47 pm
Ndinokutendai Baba Mwari kudenga uye naJesu mwanakomana wenyu. Ndinogamuchira zvese nemuzita raJesu rine simba amen amen amen! Ndinokumbira Mwari kuti vandiropafadze nemurume anonamata. Ndiri muKristu
Lluvia Cornelio Chikunguru 2, 2021 At 7:45 am
Ndokumbira munamatire vana vangu uye mhuri yangu yese kusanganisira baba vemwana wangu ronnie Joseph vana- Mendoza mwanakomana Alexander Mendoza Adam Mendoza anokosha Garcia Anthony Morales Lilly Mendoza ini Lluvia cornelio kubva pakuverenga kwepfungwa zvichikonzera nyonganiso kutsausa kusavimbika kusagadzikana uye hasha hakuchina rudo kubatanidza mhuri kutirwisa isu chete nekuda kwemukadzi anongoda kuzadza zvishuwo zvake neblackmagic ini handina simba anoramba achichinja baba vemwana wangu kuva munhu anotonhorera akanyanyisa kushatirwa pasina chikonzero chete anoteerera mukadzi uyu anoita chero chaanenge achida iye ari kukanganwa mhuri yake
Maria Nkgokgothi Chikunguru 17, 2021 At 3:20 am
Ndichapupura muzita raJesu Kristu weNasareth 🙏
Munamato weRununuro kubva pachivi